आईपीएल : युएई पुगेका सन्दिपलाई ध’क्का – सडक मिडिया
आईपीएल : युएई पुगेका सन्दिपलाई ध’क्का
करेबियन प्रिमियर लिग टि-२० मा सहभागिता जनाएका नेपाली स्पिनर सन्दिप लामिछाने १३ औं संस्करणको आईपीएलमा सहभागी हुन साेमबार मध्यरातमा युएई पुगेका छन् । आइतबार पुग्नुपर्ने भएता पनि सन्दिपको फ्ला’इट छुटेका कारण उनि ढिला युएई पुगेका हुन्। पछि सन्दिप सेप्टेम्बर ११ मा युएई प्रस्थान गरेका थिए।
युएई पुगेपछि अब सन्दिप अनिवार्य ६ दिन क्वा’रेन्टाइनमा बस्नेछन् जुन दौरान उनको २ पटक कोभिड-१९ टेस्ट गरिनेछ। दुवै टेस्टको रि’पोर्ट ने’गेटिभ आएको खण्डमा सन्दिपले टिमसंग जोडिने मौका पाउनेछन्।
सन्दिप दिल्लीको पहिलो खेल नखेल्ने भने अब पक्का भएको छ। दिल्लीले लिगमा पहिलो खेल किंग्स-११ पन्जाब बि’रुद्ध सेप्टेम्बर २० तारिखमा खेल्नेछ। उक्त मतिसम्म सन्दिप क्वारेन्टाइनमा बस्नु पर्ने हुँदा उनले पहिलो खेल गु’माउने नि’श्चित भएको हो। टिमले दोश्रो खेल सेप्टेम्बर २५ मा चेन्नाई सुपर किंग्स बि’रुद्ध रहेको छ जुन खेलमा भने सन्दिप उपलब्ध हुनेछन्। त्यसको लागि कोरोना रिपोर्ट भने ने’गेटिभ आउनु पर्नेछ।
कति जनाले पढें ? 11,480
Previous Post: मोदीको जन्मदिन : प्रधानमन्त्री ओलीले दिए शुभकामना !
Next Post: कुलमानकाे पुनः नियुक्ति सम्भावना कायमै, ऊर्जामन्त्रीको सचिवालयले यस्ताे भन्याे…..